Nyankopɔn no Botae ma Hɛn
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Bété Cambodian Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Cuba Mmum Kasa Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French Futuna (East) Ga (Nkran Kasa) German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Ivory Coast Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexico Mmum Kasa Mfantse Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Mmum Kasa Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tatar Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vezo Vietnamese Vietnamese Mmum Kasa Wallisian Waray-Waray Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
SƐ EKENKAN dawurbɔ krataa, itsie radio anaa ehwɛ TV a, ibohu na ebɛtse ewudzi, akodzi nye emumuyɛ ho nsɛm pii. Ibia osian yarba bi anaa wo dɔfo bi a oewu ntsi, iridzi awerɛhow.
Bisa woho dɛ:
Aso asetsena yi na Nyankopɔn pɛ dɛ emi nye m’ebusua nya?
Henfa na mubotum enya mboa dze egyina me nsɛndzendzen ano?
Ana yebenya asomdwee mapa da bi?
Bible no dze nsɛmbisa yi ho mbuae a ɔtɔ asomu ma.
BIBLE NO KYERƐKYERƐ DƐ NYANKOPƆN BƐYƐ ANWANWADZE AHOROW YI WƆ ASAASE DO.
Nyimpa nnkɛtse yaw, wɔnnkɔbɔ nkɔkora na mberwa na wonnkowu bio.​—Nyikyerɛ 21:4
“Ebubua bohuruhuruw dɛ ɔtwe.”​—Isaiah 35:6
“Efurafo enyiwa bobuebue.”​—Isaiah 35:5
Wobenyan ewufo aba nkwa mu bio.—John 5:28, 29
Obiara nnkɛyar.​—Isaiah 33:24
Obiara benya edziban pii edzi.​—Ndwom 72:16
NYA DZA BIBLE NO KYERƐKYERƐ DO MFASO
Ibia w’adwen bɛyɛ wo dɛ nsɛm a akenkan wɔ nkrataafã a odzi enyim wɔ nwoma yi mu no yɛ adaaso bi kɛkɛ. Naaso, Nyankopɔn abɔ anohoba dɛ, ɔnnkɛkyɛr koraa, ɔdze dɛm nsesã ahorow yi bɛba asaase do. Bio so, Bible no kyerɛkyerɛ ɔkwan a Nyankopɔn bɛfa do dze dɛm nsesã ahorow yi aba.
Naaso, Bible no ma yehu dza ɔsen dɛm. Ɔkyerɛ hɛn dza ɔsɛ dɛ yɛyɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum enya enyigye ankasa na yeedzi dɛw wɔ hɛn asetsena mu ndɛ. Ɔwo dze, gye ber kakra fa susu ndzɛmba a ɔma etseetsee no ho hwɛ. Ibia bi yɛ sikasɛm, ebusua mu nsɛndzendzen, yarba anaa wo dɔfo bi a oewu. Bible no botum aboa wo ma eegyina dɛm nsɛndzendzen yi ano. Bio so, ɔdze dɛm nsɛmbisa ahorow yi ho mbuae a obotum ama enya awerɛkyekyer no ma:
Ebɛnadze ntsi na yehu amandze?
Yebesi dɛn etum egyina hɛn haw ahorow ano?
Ana w’ebusua botum enya enyigye?
Sɛ nyimpa wu a, henfa na ɔkɔ?
Ana yebohu hɛn adɔfo a woewuwu no bio?
Ebɛnadze ntsi na yebotum enya ahotodo dɛ Nyankopɔn bɛma n’anohoba biara aba mu?
Nokwasɛm nye dɛ, nwoma a erekenkan yi da no edzi dɛ epɛ dɛ ihu dza Bible no kyerɛkyerɛ. Dɛm nwoma yi bɔboa wo. Akenkansɛm biara wɔ nsɛmbisa a ɔbɔboa wo ma aatse Bible no ase yie. Nyimpa ɔpepem pii enyi gye nsɛm a wobisa na wɔma ho mbuae no ho ber a wɔnye Jehovah Adasefo rususu Bible no ho no. Yɛhwɛ kwan dɛ, wo so w’enyi bɛgye ho. Ber a irusũa dza Bible no botum akyerɛkyerɛ wo no, ɔmbra dɛ ibenya Nyankopɔn ne nhyira!
HU WO BIBLE NO MU NSƐM
NWOMA 66 na ɔkã bɔ mu yɛ Bible no. Wɔakyekyɛ mu ayɛ no tsir nye nyiyimu ahorow. Iyi ma ɔyɛ mberɛw dɛ ibohu nyiyimu a wɔatwe adwen esi do no. Sɛ wɔtwe adwen si kyerɛwsɛm bi do wɔ nwoma yi mu a, nɔmba a odzi nwoma no ekyir no kyerɛ Bible mu nwoma no ne tsir, na nɔmba a odzi hɔ no kyerɛ nyiyimu no. Dɛ nhwɛdo no, sɛ ihu “2 Timothy 3:16” a, ɔkyerɛ dɛ Timothy nwoma a otsĩa ebien, tsir 3, nyiyimu 16.
Sɛ ibue kyerɛwnsɛm a wɔatwe adwen esi do no na ekenkan a, ɔnnkɛkyɛr koraa ma eehu Bible mu. Ibotum ahyɛ ase akenkan Bible no da biara. Sɛ ekenkan tsir ahorow bɛyɛ ebiasa kesi enum da biara a, ibotum akenkan Bible mu no nyina ewie wɔ afe kor mu.